Njem na Stockholm na oyi na-enwe ya kpokọtara mma | Akụkọ Njem
Maria José Roldan | | Getaways Europe, Stockholm
Mgbe ndị mmadụ kpebiri ime njem n’oge dị iche iche n’afọ, ha nwere ike họrọ ebe ọ ga-aga dabere na ọnọdụ okpomọkụ ha na-achọ. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ndị mmadụ n'oge oyi na Spain ha na-achọ okpomọkụ nke osimiri ma mgbe ọ bụ ọkọchị na ọ na-enwu ọkụ, ha na-achọ ọnọdụ kachasị dị nfe iji nwee ike ịnagide ihu igwe nke ọma ma nwee ọ theirụ ụbọchị ezumike ha . Ma, mgbe anyị na-ekwu maka ịga njem na Stockholm, olee mgbe ọ ka mma?
1 Akwa mma nke Stockholm
2 Stockholm bụ maka njem n'oge oyi
3 Ọ dị ogologo, oyi na-atụ!
4 Kedu ihe ị ga - eme mgbe ị gara Stockholm?
4.3 Na mgbede
5 Ihe iburu n'uche mgbe ị gara Stockholm
Akwa mma nke Stockholm
Stockholm bụ obodo na-egbu maramara mana inweta mma. Ọ bụ obodo dị mfe ịchọpụta na nke ahụ ga - eme ka ị nwee ezigbo ịhụnanya maka ya ozugbo ị zutere ya. A na-ekesa ya site na agwaetiti 14 jikọtara ya na akwa 57, na-eme ka ọ kọmpat obodo, ị nwere ike nweta n'ebe ọ bụla mfe.
Agbata obi obodo ọ bụla nwere agwa dị iche, agbanyeghị, ha nọ ibe ha nso nke na ọ dịka na agwakọta ha. Ihe dị mma banyere nke a bụ na ị nwere ike ịhụ ọdịiche ha niile n'ime mita ole na ole nke ibe ha.. Na mpaghara ọ bụla ị ga-ahụ nhazi dị iche, nke ga-edozi ihe na-eme n'okporo ámá ya, gastronomy dị iche iche, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie dị egwu, ụlọ ahịa ị na-achọghị ịhapụ, nnukwu ogige ntụrụndụ na ọtụtụ ikuku iji nwee ọ enjoyụ n'oge ọ bụla n'ụbọchị.
Stockholm bụ maka njem n'oge oyi
Onwere otutu ndi choro igha Stockholm, tumadi n’oge oyi. Ihe kpatara ya bu ihe di nfe, ha ma ka esi ebu oyi nke oma ma ha huru ihu snow na-ekpuchi obodo ahụ dum site na ọnwa Nọvemba rue Machị. Ọ dị ka obodo na-enweghị akụkọ ebe okporo ụzọ niile nwere agba ọcha mara mma.
Osimiri Stockholm na-agbaze mmiri na ọkụ obodo ga-eme ka ihe niile dị ọkụ, na ogige na n'ámá na-ntụpọ na mmiri mmiri kristal na oyi na-atụ. Ga-adị ọkụ ma ọ bụrụ na ịchọghị ijide oyi ọjọọ, mana onyonyo obodo ahụ bụ akwụkwọ ozi ... anwansi juputara n'akụkụ niile.
Ọ dị ogologo, oyi na-atụ!
Na-agbakọta nke ọma n'ihi na anyị malitere njem anyị nke ụlọ nyocha nke oge ochie na akwa mmiri nke Gamla Stan, Sodermalm na mpaghara obibi nke Kungsholmen. Stockholm na oge oyi, ọkachasị na ekeresimesi, na-eyiri uwe, agba na agba bọọlụ ekeresimesi. Na Stortorget na Skansen enwere ahịa ekeresimesi jupụtara na ekpomeekpo.
Ọ bụrụ na oyi na-atụ gị, ọ ga-akacha mma ịba ụfọdụ n’ime ebe ngosi ihe mgbe ochie ya ma ọ bụ nka, Ma ọ bụ nanị banye n'ime ụlọ mmanya dị na etiti akụkọ ihe mere eme iji drinkụọ iko glogg, mmanya na-ekpo ọkụ nke ụbọchị ndị a. Were ya na ịnọ na Stockholm na Disemba 13, mgbe a na-eme mmemme nke Saint Lucia n'obodo ahụ, ihe ngosi na mgbakọ na paradaịs.
Kedu ihe ị ga - eme mgbe ị gara Stockholm?
Mgbe ị na-eme njem na Stockholm, ihe kachasị mma ị ga - eme bụ ibili n’isi ụtụtụ ịgagharị n’okporo ámá na n’ámá nke Gamla Stan. Ọ bụ ebe mara mma, mara mma na ọdịnala, nwere kọfị na ụlọ ya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mọstad edo edo. Inwe chocolate dị ọkụ maka nri ụtụtụ ma na-ele mgbanwe nke ndị nche na Royal Obí bụ ọrụ abụọ ga-abụ ọkacha mmasị gị.
N'ehihie, ị nwere ike ịga ije n'elu otu ọwa mmiri oyi kpọnwụrụ n'obodo. Ọ na-amasị m ịga Kungstradgarden Park, ebe ị nwere ike ịgba ọsọ maka euro 3,50 n'otu elekere ma gee egwu egwu. Ma ọ bụrụ na ị na-enwe ski, ị nwere ike ịga na mkpọda nke Hammarbybacken, na agwaetiti Sodermalm. Ọ ga-abụ ahụmahụ a na-agaghị echefu echefu na nke m ji n’aka na ị ga-achọ ịmeghachi ugboro ugboro.
Mgbe e mesịrị, tupu nri abalị, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịgagharị na Djugarden, àgwàetiti kachasị ukwuu, ị ga-ahụ na ọ ga-adị ka ihe kachasị mma ị ga-ahụ na Stockholm. Mgbe oge oyi bịara, m nwere ike ijide gị na agwaetiti a ghọrọ ezigbo ezigbo ugwu oyi. N'ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịga na Skansen Museum na Zoo, nke malitere na 1890, nke na-eweghachi obodo Scandinavia oge ochie.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ka ọ bụ nnukwu oyi na-atụ ọtụtụ ndị anya, Stockholm n'oge oyi bụ otu n'ime ebe ndị kwesịrị ya. Ọnọdụ a na-eku ume bụ ihe pụrụ iche, Christmas, anwansi. Snow, ọkụ na ụcha ga-ebuga anyị n’oge oyi nke anyị ahụtụbeghị.
Ihe iburu n'uche mgbe ị gara Stockholm
Ozugbo ị gụrụ isiokwu a dum, ọ ga-abụ na ọ dị gị mkpa ịga njem na Stockholm iji nwee ike ịmata akụkụ ya ọ bụla ma nwee ọ enjoyụ ebube niile ọ na-echere gị. Ọ bụghị obere, ị gaghịkwa akwa ụta. Mana iji gaa n’obodo a, ị ga-enwerịrị ihe niile akwadoro ma kee ya. Ọ dịghị ihe dị njọ karịa ịbịarute obodo dị anya site n'ụlọ gị nke ị na-amaghị na ịmaghị otu esi aga ma ọ bụ ebe ị ga-aga.
Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịchọta ebe obibi. Iji chọta ebe kachasị mma ịnọ, ihe ị kwesịrị iburu n'uche bụ ebe ịchọrọ ịbịaru nso. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịga mpaghara ahụ, ọ gaghị esiri gị ike n'ihi na ị ga-anọ nso, ị gaghịkwa akwagharị nke ukwuu. Ozugbo i doro ya anya, chọọ ụlọ nkwari akụ ndị na-eme ihe masịrị gị na ihe ndị masịrị gị ma chọọ echiche ndị ọrụ na ntanetị, yabụ ị ga-ama ma echiche ndị ahụ ọ dị mma ma ọ bụ na-adịghị mma ma ị nwere ike ịtụle ohere dị iche iche ruo mgbe ịchọta nke kachasị gị mma.
N'ikpeazụ, mgbe ịmara ụbọchị ị ga-aga, mgbe ị matara na ụlọ nkwari akụ ahụ nwere ụbọchị ịchọrọ gị na tupu ị kwụọ ụgwọ ndoputa, ị ga-enwe ihe ịzụta ụgbọ elu gị ụgbọ elu nwee ike iru obodo anwansi a. Ozugbo ijikọtara ihe niile, naanị ị ga-echere ụbọchị pụrụ iche iji malite njem gị.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ịga Stockholm na otu esi agagharị, ị ga-agarịrị gaa na web a ịchọta ozi niile ịchọrọ ma si otú a nwee ike ịhazi njem zuru oke. You maraworị mgbe ị ga-ede akwụkwọ ezumike gị iji chọpụta obodo a mara mma?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Stockholm » Ga Stockholm na oyi
Anọ m n’oge ọkọchị m hụrụ ya n’anya ma n’afọ a, m na-eme atụmatụ ịga n’oge oyi
M na-ajụ gị n'oge oyi, ị nwere ike ịme njem site na ọwa mmiri ??? Ka ọ bụ na oyi kpọnwụrụ ha? Agam aga aga ekeresimesi
Naanị m nọrọ ụbọchị ole na ole n'obodo ahụ wee hụ Stockholm n'anya. Onwere onye ga agwa m ihe ekeresimesi di ebe ahu ??